Tajikistan: Parlemanta Manenjika Mpamosavy · Global Voices teny Malagasy
Tajikistan: Parlemanta Manenjika Mpamosavy
Voadika ny 08 Avrily 2018 15:14 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, 日本語, 简体中文, 繁體中文, English
(Fanamarihana : Lahatsoratra nivoaka tamin'ny Desambra 2007)
Manandrana mandrava ny filalaovana ody sy ny fandraikiraikena i Tadjikistan. Ny tena marina, tsy dia mahagaga loatra ny Tadjiks izy io taorian'ny namoahan'ny Parlemanta ireo lalàna mahatalanjona navoaka misesisesy. Ny volavolandalàna mikasika ny filalaovana ody rahateo dia tafiditra ao anatin'ny “Fanavaozana Ara-kolontsaina” ao Tadjikistan, natomboky ny filoha Rahmon vao haingana tamin'ity taona ity.
Mifanohitra amin'ny hatezeran'ireo vahiny, toa tsy mahagaga amin'ny ankamaroan'ny Tajiks izany, izay mihevitra fa tsara ny manafay ireo mpifetsifetsy. Olona manodidina ny 5.000 ao Tadjikistan (olom-pirenena iray amin'ny efa ho 150) no voarakitra ao anatin'ny Foiben'ny Fitsaboana Nentindrazana ho “mpanasitrana” – ny ankamaroan'izy ireo dia voarohirohy amin'ny resaka filalaovana ody sy fandraikiraikena avokoa ary mahazo volabe.
Maro ireo rohy ao anatin'ny tontolom-bolongana mankany amin'ireo lahatsoratra momba ny famoretana ny filalaovana ody, saingy vitsy amin'izy ireo no maneho hevitra amin'izany. Ireto ny sasany amin'izy ireo:
Maneso i Ian ao amin'ny Beyond the River milaza fa:
“Ity famoretana tena ilaina ity dia tonga ao anatin'ny fotoana izay manasarotra ny fahazoana herinaratra ho an-dry zareo ao an-drenivohitry ny firenena. Namoaka fanambaràna avy tamin'ny mpitondra teniny i Harry Potter manameloka ity fanitsakitsahana farany ity nataon'ny governemanta Tajik manohitra ny zon'olombelona ananan'ireo mpilalao ody sy ny vondrona ara-pinoana hafa.”
Mihevitra i Jan tao amin'ny Chess, Goddess and Everything, fa tsy ho azo atao ny hanakana ny olona amin'ny zavatra efa nataony nandritra ny an'arivo taona, mbola talohan'ny Silamo:
Mampahatsiahy ahy ny fikasàn'ireo kaominista tao Rosia sy Shina izy io mba hamongorana hatramin'ny fotony ny finoana manaraka lamina. Làlana ambanin'ny tany no nizoran'izany rehetra izany. Tsy mandaitra velively ny famongorana mandritra ny fotoana maharitra.
Manontany tena i David avy amin'ny Hoolavoo.com raha toa ratsy tokoa ny miaina ao Tadjikistan araka izay taterin'ny vaovao:
Misaotra an'Andriamanitra, mandray fepetra ny sasany nony farany manohitra ny filalaovana ody ao anatin'ny vanimpotoana moderina misy antsika. Amin'izao fotoana izao, tsy misy ratsy avokoa, satria nesorin'izy ireo ihany koa ireo mariazy mandany vola be ary ifantohan'ny governemanta ireo fiara sy findain'ireo tanora sy mpanaram-po.
Talanjona fatratra i Ashr501 nahafantatra momba ny famoretana ny filalaovana ody ao Tajikistan:
Tena mampitahotra ahy ny hoe – isak'izay mahavita manoratra tantara iray izay nitombo tao an-dohako aho – tahàka ny hitranga foana io karazan-javatra io.
Sokajian'i Matt Philip ho toy ny “faran'izay hafahafa” ny tantaran'ilay volavolan-dalàna manohitra ny mosavy sy filalaovana ody:
Hatreto, toa ohatran'ny mizotra amin'ny làlana tsara izy ireo ho an'ny hoavy mamirapiratra ary mamirapiratra miaraka amin'ireo olana goavana ara-tsosialy iainan'ny fiarahamonina rehetra rehefa voaavaka sy voatokana tsara tsy nisy tomika. Tena tsara.
Manontany tena i Tom Gross raha toa mijanona ho “famaharana farany ho an'ny mosavy” i Tajikistan. The amateur scientist irery ihany no mety ho olona anaty tontolom-bolongana izay mahita antony tsara ao ambadiky ny fanapahankevitry ny parlemanta:
…io lalàna io, na toa sahala amin'ny fepetra iray mangeja manohitra ny fahalalahana maneho hevitra aza, dia tena tranga iray fotsiny amin'ny famoretan'ny governemanta ny fandrobàna ara-panahy.
Niaraha-nampita tamin'ny neweurasia.